Wasiirka Cayaaraha oo daah furtay tartanka kubadda cagta ee Degmooyinka “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Wasiirka Cayaaraha oo daah furtay tartanka kubadda cagta ee Degmooyinka “SAWIRRO”
Wasiirka dhallinyarada iyo cayaaraha ee Xukuumadda Soomaaliya Marwo Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa maanta daahfurtay tartanka kubadda Cagta ee Degmooyinka Gobolka Banaadir, iyadoo ay ka qeyb galeen mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Gobolka Banaadir iyo xubno kale oo ka tirsan bahda cayaaraha, kaasi oo ka furmay Garoonka kubadda cagta ee Banaadir.
Dadweyne aad u fara badan oo ka kala yimid degmooyinka Gobolka Banaadir ayaa u soo daawasho tegay kulankii maanta ee lagu daahfuray Degmooyinka Waaberi iyo Dharkeynleey, waxaan xidigaha labada dhinac ay soo bandhigeen cayaar aad u wanaagsan oo ay jecleysteen dadkii u soo daawasho tegay.
Guddoomiyaha Xirirka cayaaraha ee Maamulka Gobolka Banaadir Xasan Aadan Yabarow Wiish ayaa sheegay in diyaargarowga tartanka uu soo socday muddo saddex bil ah, waxaana uu cayaartooyda ka codsaday inay ilaaliyaan anshaxa tartanka u degsan.
Guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo Siyaasadda ee Gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Maxamed ayaa sheegay in tartankan loogu talagalay isdhexgalka bulshada, isagoo shacabka ugu baaqay inay ka qeyb qaataan amniga caasimadda.
Cayaartooyda Degmada Waberi ayaa guul ku bilaabay tartanka Degmooyinka Gobolka kadib markii 2-0 ay uga badiyeen dhigooda Dharkeenleey, iyadoo labo xidig oo ka mid ah xulka Waaberi ay qaateen kaarka casaanka ah, kadiib markii Garsooraha uu ku arkay qalaad ay ku galeen cayaartooyda kale ee ka tirsan Degmada Dharkeenleey.
Maalinta beri ah ayaa la filayaa in labo kulan uu ka dhaco garoonka Banaadir stadium ee degmada C/casiis kaasi oo ay isku arki doonaan Warta Nabadda iyo Hodan, halka ay sidoo kale wada cayaari doonaan Yaaqshiid iyo Shangaani.
Waberi oo ah ku guuleystayaasha tartanka sanadkii hore ayaa ka mid ah degmooyinka loo saadalinayo inay tartankan ku guuleystaan.
Daawo Sawirrada: Shirki nabadeynta ee ka socday Cadale oo meel wanaagsan maraya